"सपना यस्तो छ" "सपना यस्तो छ"
पुष १७, २०७७ स्नेह शर्मा
सपना भनेको जीवनको लक्ष्य हो । सपना बिना जीवन अधुरो नै हुन्छ त्यसैले सपना देख्नु मानिस हुनुको अर्थ हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी धेरै जनाको सपना जीवनमा सुख पाउने र सफल हुने नै हुन्छ । तर, कसरि जीवन सुखी हुन्छ र सफलता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा भने ख्याल भने राख्दैनौ ।
विश्वका सफल व्यक्तिहरु भन्छन सपना देख, असफल व्यक्तिहरु भन्छन धेरै सपना नदेख… सपना देख्नुपर्छ, उदेश्य राख्नुपर्छ तर तेसै अनुरुप कार्यसम्पादन पनि । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले तेसै भनेका होइनन् ‘उदेश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेर दशकौ देखि हामि नेपालीले किन विकाश गर्न सकेनौं? हामी संगैका मुलुकहरु आज कहाँ पुगी सके, हामी किन उधो गतिमा छौ ?
“सपना ” एक सुन्दर शब्द , मेराे सफलता , प्रेरणा , साथ हाे । मन ,मस्तिष्क र मेराे मुटुमा बसेको एक सुनौलो बिहानी हाे मेराे सपना। मिठाे बिहानी बनेर आउने छ मेराे सपना । आमा बाबाले भन्नु हुन्छ तिमी सानैदेखि एक मेहनती र सहयोगी मान्छे हाैँ, तिमीले आट गरे सबै कुराहरु गर्न सक्छाैं।
सानैदेखि राम्राराम्रा मान्छेरूकाे बिचमा बस्ने मेराे बानीले मलाई अहिले आत्मविश्वास भएकी नारी बनाएकाे छ , आफ्नो मनकाे कुराहरु गर्ने मेराे बानीले मलाई भविष्यमा एक असल ब्यक्तिको रुपमा नेपालमा चिनाउने छ ।
समयसँग बिस्तारै आगाडि बढियाे भने आफ्नाे सपना छिटाे साकार हुँदै छ है भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिने रहेछ, भन्ने मेराे बिचार हाे । थाहाछैन पछि के हुन्छ, अथवा के हाेला भनेर तर मनले मलाई तिमी सक्छाैं मात्र भन्छ, सायद मैले सक्छु पनि हाेला र ?? सानै देखि हरेक दिन, हरेक वर्षकाे मेराे उदेस्य बनेको छ मेराे सपना।
एउटा विद्यार्थीका लागि परीक्षामा प्रथम हुनु सफलता हो भने खेलाडीका खेल जित्नु । नेताका लागि चुनाव जित्नु सफलता होला, प्रेमी-प्रेमिकाका लागि मन जित्नु या विश्वास जित्नु… आदि । साधारणतया कसैले गरेको प्रयास सार्थक हुनु भनेकाे र आफ्नो गल्ती मान्नुपर्छ है ए सपना !
हेर्दै जा न सपना एकदिन म पनि सफलता प्राप्त गरेको एक युवा, एक असल नारी भएर याे देशमा सबैका सामु आइपुग्ने छु। निदायको शहर होइन, ब्युँझिएको शहर हेर्ने रहर छ, दुःखी मुख हैन, आेठ्मा हाँसो भएकाे हर्न मन छ, साझा ७ बजे आमा घरबाहिर मेरालागि पर्खेर बसेको हैन, घरभित्र बुबासँग आफ्नो यादहरु ताजा गरेकाे हर्न मन छ, म कुनै प्रतियाेगिताबाट जितेर, हैन् १०० छाेटी हारेर जितकाे हेर्न मन छ, भाईले दिदि आज मेरा लागि के लाउनु भयाे हैन्, दिदि घर आउ्दा केही समस्या त भएन नि भनेकाे साेन्न मन छ ।
सायद बिगत केही समयदेखि म धेरै कुराहरु बुझ्ने भएकी छु, तर मेराे मन भने अझैँ मजबुत भएकाे छैन् । सा-सानाे कुराहरूमा पनि मेराे रुने बानीले मलाई आझैँ मज्बुद बनाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ । कल्पना गर्न ये मन तर चिन्ता नगर म एक दिन एक असल नारी, एक सफल व्यक्ति र एक असल छाेरी बन्नेछु। देश र देशप्रतिको मेराे भावना र माया सधैं आगाडि रहनेछ, न त म मेराे देशकाे मायालाई मर्न नै दिनेछु न त मेराे सपनालाई।
मेराे सपना एक असल महिलाका साथसाथै राम्रो वकिल भनेर देश र समाजको निर्माण गर्नु हाे । समयकाे खेलले मलाई कहिले कहाँ लिन्छ थाहा छैन् तर मेराे एक मात्र लक्ष्य बनेकाे मेराे सपना म पुरा गरेरै छाड्ने छु ।
सपना मर्नु नै आफू मर्नु हो; जिउँदो मूर्दाको निशानी हो । हाम्रो अलमल र अन्योलताको कारण अजम्बरी सपना फुल्न नपाई बतासको तीव्र झोक्काले कतै बिरानीमा उडाएर लाने त होइन ! यसो भइदियो भने ‘सबैभन्दा खतरनाक’ क्षणको साक्षी म मात्र नभई समस्त मानव समाज हुनेछ । बाेक, प्यास र निन्द्रा नलाग्ने बनाएकाे छ मेराे सपनाले मलाई , हेर्दै जाउँ न म फेरी याे लेख विकल भएपछि लेख्नेछु।
म त्याे दिन सफल हुन्छु, जुन दिन कालाे काेट लगाएर तिमी सामु आउने छु बा !!!